29 Nov 2017 . 12:16 PM
အခုနောက်ပိုင်း Android ဖုန်းအချို့မှာ Music Player ကို Build in မထည့်သွင်းပေးတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ရှိပြီးသား Music Player ကြီးကိုနဲ့သီချင်းနားထောင်ရတာ အရမ်းရိုးအီနေလို့ အသစ်အဆန်းလေးများပြောင်းလဲကြည့်လိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အောက်ပါ Music Player5ခုကို စမ်းသပ် အသုံးပြုကြည့်သင့်ပါတယ်။
အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံး Player တစ်ခုပါပဲ။ Computer မှာလည်းအရမ်းကောင်းတဲ့ Player တစ်ခုဖြစ်တဲ့ AIMP Player ဟာ Android OS အတွက်ပါ ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အသုံးပြုရတဲ့ UI ဟာရိုးရှင်းတဲ့အတွက် Music Player ကိုအကျွမ်းတဝင်မရှိတဲ့ User အသစ်တွေတောင်မှအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Black Player ကလည်း Feature စုံစုံလင်လင်နဲ့ အသုံးပြုလိုတွေအတွက် အတော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။ Equalizer ပါဝင်တာကြောင့် သံစဉ်ကို မိမိလိုအပ်သလိုချိန်ညှိပြီးနားထောင်နိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့သီချင်းတွေကို အမြန်ဆုံးရှာဖွေပေးနိုင်တဲ့ Player ကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ UI ကလည်းရိုးရှင်းပြီး Album art တွေနဲ့ဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်တာကြောင့်အမြင်တစ်မျိုးဆန်းပြီး အသုံးပြုလို့ကောင်းမွန်တဲ့ App တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Jet Audio ကတော့ Free နဲ့ Preminum version နှစ်မျိုးလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Freen version မှာတင်တစ်ကယ်ကိုပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ Player အဖြစ်အသုံးပြုနိုငနေပါပြီ။reverb and x-bass, playback speed control အစရှိတဲ့ Audio နဲ့ပတ်သက်တဲ့ effect အစုံအလင်ကို Control ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Music Player တွေဟာ များသောအားဖြင့် Black သို့မဟုတ် White UI တွေအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Shuttle Player ကတော့ ကိုယ့်သီချင်းမှာပါဝင်တဲ့ Album art color အတိုင်း အရောင်များအလိုလျှောက်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ UI ပါရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သီချင်းများကိုလည်း ဖုန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ Storage နေရာလွတ်မကျန် အသေးစိတ်ရှာဖွေပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
Android အတှကျ Free ရယူနိုငျသညျ့ အကောငျးဆုံး Music Player မြား
အခုနောကျပိုငျး Android ဖုနျးအခြို့မှာ Music Player ကို Build in မထညျ့သှငျးပေးတာမြိုးကွုံရတတျပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျ ရှိပွီးသား Music Player ကွီးကိုနဲ့သီခငျြးနားထောငျရတာ အရမျးရိုးအီနလေို့ အသဈအဆနျးလေးမြားပွောငျးလဲကွညျ့လိုရငျပဲဖွဈဖွဈ အောကျပါ Music Player5ခုကို စမျးသပျ အသုံးပွုကွညျ့သငျ့ပါတယျ။
အရိုးရှငျးဆုံးနဲ့အကောငျးဆုံး Player တဈခုပါပဲ။ Computer မှာလညျးအရမျးကောငျးတဲ့ Player တဈခုဖွဈတဲ့ AIMP Player ဟာ Android OS အတှကျပါ ထုတျလုပျပေးခဲ့ပါတယျ။ အသုံးပွုရတဲ့ UI ဟာရိုးရှငျးတဲ့အတှကျ Music Player ကိုအကြှမျးတဝငျမရှိတဲ့ User အသဈတှတေောငျမှအဆငျပွတောကိုတှရေ့ပါတယျ။
Black Player ကလညျး Feature စုံစုံလငျလငျနဲ့ အသုံးပွုလိုတှအေတှကျ အတျောလေးအဆငျပွပေါတယျ။ Equalizer ပါဝငျတာကွောငျ့ သံစဉျကို မိမိလိုအပျသလိုခြိနျညှိပွီးနားထောငျနိုငျဦးမှာဖွဈပါတယျ။
ဖုနျးထဲမှာရှိတဲ့သီခငျြးတှကေို အမွနျဆုံးရှာဖှပေေးနိုငျတဲ့ Player ကောငျးတဈခုပဲဖွဈပါတယျ။ UI ကလညျးရိုးရှငျးပွီး Album art တှနေဲ့ဖျောပွပေးထားတာဖွဈတာကွောငျ့အမွငျတဈမြိုးဆနျးပွီး အသုံးပွုလို့ကောငျးမှနျတဲ့ App တဈမြိုးပဲဖွဈပါတယျ။
Jet Audio ကတော့ Free နဲ့ Preminum version နှဈမြိုးလာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Freen version မှာတငျတဈကယျကိုပွညျ့စုံကောငျးမှနျတဲ့ Player အဖွဈအသုံးပွုနိုငနပေါပွီ။reverb and x-bass, playback speed control အစရှိတဲ့ Audio နဲ့ပတျသကျတဲ့ effect အစုံအလငျကို Control ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
Music Player တှဟော မြားသောအားဖွငျ့ Black သို့မဟုတျ White UI တှအေမြားဆုံးဖွဈပါတယျ။
Shuttle Player ကတော့ ကိုယျ့သီခငျြးမှာပါဝငျတဲ့ Album art color အတိုငျး အရောငျမြားအလိုလြှောကျပွောငျးလဲပေးနိုငျတဲ့ UI ပါရှိပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သီခငျြးမြားကိုလညျး ဖုနျးတဈခုလုံးရဲ့ Storage နရောလှတျမကနျြ အသေးစိတျရှာဖှပေေးနိုငျပါသေးတယျ။
by Min Than Htike . 12 hours ago
Calendar SMS Notification Feature ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာဖြုတ်ပစ်တော့မယ့် Google
Camera Sample တွေထွက်လာပြီဖြစ်တဲ့ Google Pixel3Lite
iOS အတွက် Google Photos App မှာ Depth Effect ကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီ